२०७३ पुस १७ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
बहुजन शक्ति पार्टी संविधान संशोधनको विपक्षमा –पूर्वमन्त्री पासवान
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पासवानले संशोधन प्रस्ताव केही नेताहरूको भागबन्डाको राजनीतिको लागि आएको बताए । उनले सो प्रस्ताव मधेसका दलित, उत्पीडित, पिछडिएका समुदायको हकमा नभएकाले यसलाई पास हुन नदिने बताए । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रविरोधी भएको बताए । उनले आपूmले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावले मधेसका दलित, उत्पीडित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित हुने दाबी गरे । मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा पिछडिएका समुदायको नभई नेताहरूको व्यक्तिगत उत्थानका लागि भएको उनले आरोप लगाए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग भएको ४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बहुजन शक्ति पार्टीले आगामी चैत १५ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा हिजो वीरगंजमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ५ दिन पहिले प्रचण्ड सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सञ्चारकर्म
चुनाव सरकारको प्राथमिकता –महामन्त्री कोइराला
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वर्तमान सरकारले चुनावलाई पहिलोे प्राथमिकतामा राखी गृहकार्य शुरू गरिसकेको उनले बताए । ४१औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा वीरगंजमा वीपी आश्रमको भवन शिलान्याश गर्न आएका महामन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधन सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै कथंकदाचित संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसके चुनाव गराएरै छाड्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संविधान संशोधनसँगै स्थानीय निकायको चुनाव गराउने पक्षमा रहेको प्रस्ट्याएका थिए । मधेसको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नै संसद्मा सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधन गरेर मधेसी दललाई पनि स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी गराउने नेकाको सोच रहेको बताए । उनले तीनवटै तहको निर्वाचन गराएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने भएकाले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले चुनावलाई प्राथम
झोले, खोले, नबोल्ने व्यक्तिको हातमा मुलुक –पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ मिसन नेपालका संरक्षक पूर्व प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवालले सबै नागरिकलाई नेपाली भएर आप्mनो जिम्मेवारी निभाउन आग्रह गरे । वीरगंजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मुलुक अहिले राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सङ्कटमा फसेकाले आम नेपालीले आआप्mनो ठाउँबाट सच्चा नागरिकको भूमिका निर्वाह नगरे मुलुकको अस्तित्व नरहने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कटवालले मिसन नेपाल कुनै पार्टी नभई एक सामाजिक संस्था भएकोले यसमार्पmत् आपूm देशका विभिन्न ठाउँमा पुगी नेपालीहरूलाई नेपाल बचाउन आग्रह गरिरहेको बताए । नेपाल अहिले भ्रष्टाचारीहरूको हातमा फसेकाले राजनीतिक दलहरूलाई इमानदार बनाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गरे । उनले झोले, खोले र नबोल्ने व्यक्तिको हातमा मुलुक फसेकाले निकास दिलाउन सबै नागरिक आआप्mनो ठाउँबाट एक कदम अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले च्याउजस्तै नेपालमा उम्रेका दलहरूले भागबन्डाको राजनीति शुरू गरेकाले उनीहरूलाई तह लगाउन निर्वाचनमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्नेमा जोड दिए । अस्तित्व नभएका दलहरूले बिनाकारण मुलुकलाई बर्बाद गरिरहेको उनले बताए । सञ्चारकर्मीले स
निकासको औजार ः सडक कि संसद् ?
ओमप्रकाश खनाल यतिखेर अग्रगमनका ठेकेदारदेखि प्रतिगामी कित्ताले अनेक आवरणमा सडक राजनीति तताइराखेका छन् । केही सुरसार कस्दै होलान् । प्रतिपक्ष एमाले आन्दोलनमा छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाविरोधी राजावादीहरू पनि सडकमा सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरूको आस्थाको प्रतीक मानिएका ज्ञानेन्द्र शाहको निकट अभिव्यक्तिपछि सक्रियताको चाप ह्वात्तै बढेको भान हुन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी आन्दोलनको मनस्थितिमा छ । यही १८ गते प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेकै छ । उनीहरू पनि आउने अन्ततः सडकमैं हो । सकभर सत्ता नभए सडक समकालीन राजनीतिको विशेषता बनेको छ । संविधान कार्यान्वयनको मूल कार्यभार पूरा गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छोटिंदै जाँदा संविधान निर्माणका अग्रणी, असन्तुष्ट र व्यवस्थाविरोधीहरूको एकै समयको सडक सक्रियताले के सङ्केत गरिराखेको छ ? के यो संयोग मात्रै हो ? कि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई हावा खुवाएर मुलुकलाई अस्थिरताको नयाँ सुरुङतिर डो¥याउने खेलको आरम्भ ? यसै पनि राजनीति शीर्षस्थको स्वविकेकभन्दा बाह्य रिमोटबाट निर्देशित हुनु हाम्रो निम्ति नौलो तथ्य लाग्न छोडिसकेको छ । प्रत्येक कुराको छिनोफानो
२०७३ पुस १६ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारण मुलुक इतिहासकै कमजोर अवस्थामा– पूर्वप्रधानसेनापति कटुवाल
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ पूर्वप्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवालले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारण मुलुक इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । मिसन नेपाल पर्साद्वारा वीरगंजमा आयोजित सभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानसेनापति कटुवालले दलहरूको कारण धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज पनि बिथोलिएको दोषारोपण लगाए । उनले राजनीतिक दलहरूमा नेपाली हुँ भन्ने भावनाको विकास हुन नसकेको भनी चिन्ता व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलहरू जुनसुकै भए पनि पहिले नेपाली भन्ने भावनाको विकास हुन जरूरी भएको बताए । उनले नेपाली हुँ भन्ने भावनाको विकास नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको सुरक्ष्Fामा खतरा पुग्नसक्ने बताए । उनले विश्व सामू नेपाली हुँ भन्ने सिर ठाडो गर्ने सामथ्र्यवान् नेताको देशमा खाँचो भएको बताए । कटुवालले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे । कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनिक र संवैधानिक निकायका पदहरू भागवन्डाको राजनीति हावी भएकोले सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लाग्ने र पार्टीगत तथा पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको हालीमुहाली बढेको बताए । असक्ष्Fमहरू पदमा पुग
प्रस, गरुडा, १५ पुस/ सर्लाही र रौतहटको सिमा, नदीको रूपमा परिचित बागमती नदीमा पायक पर्ने ठाउँमा पुल नबन्दा ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या देखिएको छ । दुबै जिल्लालाई नदीले छुट्याएको र नदीको धार निकै ठूलो भएको कारण पुलको अभावमा सवारीसाधनलाई डुङ्गामा पार गराउनु पर्ने बाध्याता रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कर्मैयामा रहेको पुलभन्दा दक्षिणतिर करिब पचास किलोमिटर भारतमा मात्र पुल भएकोले एक जिल्लाबासी अर्को जिल्लामा जानुपर्दा निकै टाढा भएर यात्रा गर्नुपर्ने अन्यथा डुङ्गामा सवारीसाधनलाई चढाएर नदी पार गराउनु पर्ने देखिएको छ । हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव कम भए पनि पानीमा रहेको बालुवामा गाडी भासिने भएकोले डुङ्गामा गाडी पार गराउनु बाध्यता भएको सर्लाहीका पत्रकार शिवकिशोर सिंहको भनाइ छ । नदीको करिब चार किलोमिटर चौडा रहेको तथा सरदर करिब तीन सय मिटर चौडाईमा पानीको बहाव रहने गरेकोले सवारी साधनलाई पार गराउन डुङ्गा नै सबैभन्दा सजिलो साधन भएको छ । स्थल मार्गका सवारीसाधनलाई खोलापारि पु¥याउन सजिलो र परम्परागत विकल्प डुङ्गा भएको समनपुरका गाविसका लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीको भनाइ छ । सर्लाही र रौतहटलाई ज
जिप्रका र इप्रकाद्वारा हरपुरका स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया
प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दकुमार साहलाई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयले दिएको सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी नजिकै लुकाइछिपाई राखेको २५ थान बराबर १५० क्यूफिट काठ बरामद गरेको छ । शुक्रवार राति प्रहरीले सो काठ बरामद गरेको प्रउ साहले जानकारी गराए । काठ तस्करीमा प्रहरीको संलग्नता देखिएको कारण केही इन्चार्जलाई सरूवा पनि गर्ने उनले बताए । वन सुरक्षाको लागि खट्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई पनि कारबाई गर्ने उनले बताए प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १५ पुस/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको आयोजना तथा इप्रका एकटाङ्गाको सहजीकरणमा एकदिने अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै सहभागीहरूले जङ्गल नजिक रहेका गाविसहरूबाट व्यापक मात्रामा काठ तस्करी हुने गरेको बताए । वन सुरक्षाको लागि रहेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र वन रक्षक रहेतापनि मिलोमतोमा काठ, गाँजा, तथा अवैध रक्सी भट्टी सञ्चालनमा रोक नलागेप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए । हरपुरका स्थानीय किशुन देव यादवका अनुसार बिरूवागुठी गाविसको घरघरमा अवैध रक्सीभट्टी सञ्चालन रहेको र सो रक्सी वीरगंजसम्म पुग्ने गरेको बताए । अवै
वीरगंजमा ३ सयभन्दा बढी बालश्रमिक, अधिकांश भारतीय
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ वीरगंजमा सयौंको सङ्ख्यामा भारतीय बालश्रमिकहरू कार्य गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय वीरगंजले दिएको तथ्याङ्क अनुसार वीरगंजमा बालश्रमिकको रूपमा ३ सयभन्दा बढी बालकहरू काम गरिरहेका र त्यसमध्ये अधिकांश भारतीय रहेको देखाएको छ । बालश्रमिकहरूमा ५ वर्षदेखि माथिका बालकहरू होटल, रेस्टुरा, घर, घरेलु उद्योगलगायतमा कार्य गरिरहेको पाइएका छन् । वीउमनपा–१५, मूर्लीमा रहेको मणिलाल डङ्गोलको सेकुवा पसलमा मात्रै ५ जना बालकहरू श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये चारजना भारतीय छन् । भारतीय बालकहरू कसैको बुबा मदिरा सेवन गरी मृत्यु भएको र कसैको मदिरा सेवन गरी घरेलु हिंसा गरेको कारण होटलमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले आपूm कसैले पढाए पनि पढ्न नसक्ने र काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दा पनि बाध्य भएको बताएका छन् । भारत, रामनगर निवासी १० वर्षीय अजयकुमार नुनियाले बुबा मदिरा सेवन गरी मरेको र दुई भाइ, दुई बहिनीको जिम्मेवारी आपूmमा आएकोले श्रम गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यसैगरी वैरगनिया, गाँधीनगरका ९ वर्षीय आकाश पटेल र विकाश पटेलको बुबा
वीरगंज कारागारमा आतङ्क मच्चाउने ८ जना कैदीबन्दीलाई नख्खु जेल पठाईयो
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ पुष १० गते दिउसो वीरगज कारागारमा भएको चक्कु प्रहारको घटना संलग्न रहेको भन्दै आठ जना कैदीबन्दीहरूलाई केन्द्रिय कारागार नख्खुमा पठाइएको कारागार व्यवस्थान पर्साले जनाएको छ । वीरगंज कारागारमा रहेका विकास सिंह, विनय सिंह , चन्देश्वर सिंह,, मोहन सहनीलगायत आठ जना कैदीहरूलाई कारागार सरुवा गरेको वीरगज कारागारका प्रमुख क्रपानी गौतमले जनकारी गराएका छन् । केन्द्रिय कारागार नख्खु काठमाडांैमा पठाएको गौतमले बताए । गौतमका अनुसार असोज महिनामा झापा झम्मका कारागारबाट सरुवा भई वीरगंज कारागारमा आएका रौतहट पिपरीया निवासी पनिलाल पडितले १० गते आइतवार क्रिमसको अवसरमा भोज भतेर गर्ने क्रममा कैदीहरूबीच भएको विवादमा घडीअर्वा घर भएका कैदी राजन बानिया सहित आठ जना कैदीहरूलाई छुरा प्रहार गरि घाइते बनाएका थिए । पण्डितको मासु काट्ने चाकुको प्रहारबाट गम्भिर घाइते भएका बानियाको अहिले काठमाडांैको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कारागारमा अशान्ति मच्चाउन र अप्रिय घटना गराउने योजनाका साथ पडितलाई उक्साएर चक्कु प्रहार गर्न लगाएकोले आठ जना कैदीहरूलाई नख्खु कारागारमा पठाइएको प्रमुख जि
दोस्रो बैंकर्स फूटबल लिग नकआउट प्रतियोगिता शुरू
प्रस, वीरगंज, १५ पुस/ वीरगंज युथ एकेडेमीको आयोजनामा आजदेखि नारायणी रङ्गशालामा दोस्रो बैंकर्स पूmटबल लिग नकआउट प्रतियोगिता शुरू भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ, पर्सा एवं जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साका पूर्वअध्यक्ष पशुपति विक्रम शाहले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रिय पूmटबल खेलाडी ऋतु शाक्य, पर्सा भलिबल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रद्युम्न सेढाइ, वरिष्ठ पूmटबल प्रशिक्ष्Fक हरिबहादुर श्रेष्ठले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उद्घाटन समारोह खेल आयोजक कमिटीका संयोजक हेमन्तकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सञ्चालन सञ्चारकर्मी मायामितु न्यौपानेले गरेकी थिइन् । आज सम्पन्न पहिलो खेलमा नबिल बैंकले जनता बैंकलाई १ का विरूद्ध २ गोलले पराजित ग¥यो । नबिल बैंकका प्रताप थापा, विकाश चौधरीले १–१ गोल गरेका थिए भने जनता बैंकका अभिषेक कार्कीले १ गोल मात्र गरेका थिए । जनता बैंकका अभिषेक कार्की पहिलो खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । दोस्रो खेल लक्ष्मी बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई १ को बिरूद्ध ६ गोल गरी फराकिलो जीत हात पारे ।
आरआर छुछुनर एकजनाले आपूmलाई बुद्धिजीवी भन्दा मैले साँच्चिकै सुनेको शब्द बुद्धूजीवी नै हो । वीरगंजको एउटा प्रसिद्ध कान दोकान (कान बनाउने पसलभन्दा पनि बुभ्mनुभएन भने कानको क्लिनिक)मा गएको थिएँ । मेरो कानै खराब भएको भएपनि मैले सुनेको शब्दलाई मैले बुझेर आपूmले बुझेको आधारमा फेरि के सोच्न थालें भने के बुद्धिजीवीभन्दा बुद्धूजीवी ठूलो हो ? डाक्टरनेर गएर कोहीले आपूmलाई सानो त पक्कै पनि भनेन होला । सालो–भिनाजुको जस्तो गफगाफ पनि सुनिएन । त्यसैले जिस्केर त्यसो भनेको होला भनेर पछिसम्म पत्याउन मुस्किल प¥यो । कलेजमा पढ्दाको बेला सरलाई कसैले केही भन्यो वा अन्य कुनै समस्या प¥यो भने मलाई कोचिङ गराएर त्यसको भूत झार्न लगाउने प्राध्यापकलाई भेट्न डेरामा गएँ । वास्तवमा कलेजमा पढाउने गुरुजीलाई बुद्धूजीवीको अर्थ, परिभाषा, कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषयमा जान्न चाहेको थिएँ । सर अर्को प्राइवेट कलेजमा पढाउन गएका थिए । डेरामा मैडम मात्र भएकाले त्यसै फर्किन लागेको थिएँ, मैडमले सोध्नुभयो– केही काम थियो कि ? एउटा कुरो सोध्नु थियो –मैले भनें । के कुरा होला ? –मैडमले भन्नुभयो । बुद्धिजीवी र बुद्धूजीव
नेपालको सामाजिक स्वरूप र कन्नौज — एक विवेचन
बासुदेवलाल दास सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज गताङ्कको बाँकी मैनोलीसित सम्बन्धित भएकाले यिनीहरूको उपाधि मैनाली भएको हो । नेपालको भूभागमा आउनुभएका मैनाली वंशका आद्यपुरुषको नाम काशी मैनाली जोशी थियो, जसलाई भक्तपुरका राजा भूपतिन्द्र मल्लले राज ज्योतिषीको पदमा नियुक्त गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला क्षेत्रमा बिर्ता दिएर राखेका थिए । यस विषयको उल्लेख मैनाली वंशावली नामक पुस्तकमा गरिएको छ, जसको प्रकाशन विक्रम संवत् २०६३ सालतिर काठमाडौंस्थित मैनाली समाज सेवा संस्थाद्वारा गरिएको थियो । यस वंशावलीका सङ्कलकहरूमा वासुदेव मैनाली, ओकिलप्रसाद मैनाली र पुष्पराज मैनाली थिए भने पुस्तकको सम्पादनको कार्य राजेन्द्रप्रसाद मैनाली, शम्भुप्रसाद मैनाली र बद्रीभक्त मैनालीले गरेका थिए । पहाडी ब्राह्मण जातिका उपाधि, थरहरूको निर्माणमा स्थानको प्रभाव स्पष्टरूपमा देखिन्छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूसित सम्बन्धित रहेका यस्ता उपाधि र थरहरूमा जुम्ला जिल्लाको धिता गाउँसित सम्बन्धित थर धिताल, पाण्डुसेराबाट पाण्डे, सिंजाबाट सिंजापति, चदिलागाउँबाट चौलागाईं, सुवाडाबाट सुवे
चन्द्रकिशोर प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको तथ्य कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई लिएर भनिन थालिएको छ, धानले कृषकको आम्दानीसमेत बढाउँछ । यसले बजारमा समेत राम्रो असर पार्ने छ । यस्ता खबरले आम नेपालीमा खुशी छाउनु स्वाभाविक हो, तर केन्द्रले प्रस्तुत गरेको यो तथ्याङ्कको तराजूमा एउटा सामान्य कृषि श्रमिकको “अगहनी आम्दानी” अर्थात् मङ्सिरमा धानकटाइपछि हुने आर्जनसँग तौलिंदा कस्तो स्थिति बाहिरिन्छ, त्यसबारे राज्य पुनर्संरचनाको गम्भीर छलफलमा लागेकाहरूले सोच्ने भेउ नै पाएनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्कको जोडघटाउ र कृषि कर्ममा वर्षभरि संलग्न व्यक्तिको जीवनस्तरमा पर्ने अन्तरको दूरी नसम्झेसम्म नेपालमा धानको राजनीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँदैन । उसो त केही साता पहिला अर्काको जग्गा कब्जा गरी उब्जाइएका धानको लागि माओवादीभित्रकै दुई गुटबीच तँछाडमछाड भएको समाचार आएकै हो । विगतमा माओवादीहरूले आपूmखुशी जग्गा कब्जाको घोषणा गरे, त्यसका उब्जनी आपूmखुशी प्रयोग गरे र यसरी अघोषितरूपमा जग्गा राजनीतिसँगै “धानराजनीति” पनि ल्याएको देखिन्छ । तर मूलत
व्यवस्था नै बेइमान भएपछि इमान कहाँ खोज्ने ?
वैद्यनाथ ठाकुर एक जमाना थियो, जति बेला कम्युनिस्टको हाउगुजीले पूरै संसारलाई खाइरहेको थियो । अहिले जमाना बदलेको छ । कम्युनिस्टहरू खासगरी सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् रक्ष्Fात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यति बेला कम्युनिस्टसँग कोही पनि डराउँदैनन् । यसको मुख्य कारण चाहिं कम्युनिस्टहरू नै बिग्रिसकेपछि किन कोही कम्युनिस्टसँग डराउने ? संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्ष्Fात्मक भएपनि नेपालमा यसको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि देशको बहुसङ्ख्यक जनता नै कम्युनिस्ट छ । कम्युनिस्टहरूले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा पाएको मत एक ठाउँमा जम्मा गर्ने हो भने झन्डै सत्तरी प्रतिशत जनता कम्युनिस्टको पक्ष्Fमा छ भन्ने देखाउँछ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ जुन चिजको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो बुर्जुवा पार्टीले गर्नुपथ्र्यो आज त्यसको विरोध नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । केवल आपूm सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा बोध र जुङ्गाको लडाइँले । जहाँसम्म राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको कुरा छ, त्यो महाकाली नदी सम्झFैता भारतसँग गर्दा र नेपाली भूमि टनकपुरमा भारतीय पक्ष्Fले बाँध बनाउँदा एमाले सम्पूर्णरूपले नाङ्गिसके
ट्राफिकमा सुधार खोइ
वीरगंजको ट्राफिक व्यवस्थामा सुधार हुन सकेन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि वार्षिक कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डर बनाएर काम नगरेको कारण सुधार हुन सकेको छैन् । वीरगंज शहर, मितेरीपुलदेखी गण्डकचोकसम्म करिब सात किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । देशको मुख्य प्रवेशद्वार भएको कारण वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट आउने दैनिक सयौं सवारीसाधनहरू यो शहरको बाटो भएर देशका विभिन्न भागहरूमा पुग्छन । भन्सारबाट बाहिरिने सवारीका साधनहरूको लागि रजतजयन्तीचोकबाट बाईपास सडक हुँदै गण्डकचोक निस्कने हुँदा शहरको ट्राफिक व्यवस्थामा यसको असर कम पर्ने गरेको छ । भन्सारबाट शहरतर्फ आउने सवारीका साधनहरूलाई तोकिएको समयमा मेनरोडको बाटो उपलब्ध गराईएको छ । रजतजयन्तीचोकमा ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी छ । तर तोकिएको समय बाहेक त्याहाँबाट सवारीका साधनहरू भित्रिन्छन भने ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई कारबाई गर्ने परिपाटी नभएकोले यो समस्या अहिलेसम्म विद्यमान छ । टाङ्गा, टेम्पोका लागि मेनरोड बाहेक इनरबाईपास र बाईपास सडकको व्यवस्था गरिएको छ । शहरमा सबैभन्दा बढी ट्राफिक समस्या भनेको घण्टाघरदेखी अस्पतालसम्मको मेन
२०७३ पुस १५ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
ई–रिक्साको सन्दर्भमा ट्राफिक सुस्तायो
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्सा वीरगंजमा अवैध तरिकाले सञ्चालित ई–रिक्सा रोकथाम गर्न असफल भएको छ । गत कात्तिक महिनामा अवैध तरिकाबाट सञ्चालित ई–रिक्साविरुद्ध अभियान छेडेको ट्राफिकले अहिले सो अभियान सञ्चालन गरेको छैन । वीरगंजमा सञ्चालित ई–रिक्साको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले ट्राफिकले अभियान शुरु गर्दा मङ्सिर १५ गतेसम्मको समय सीमा दिइएको थियो । ई–रिक्सा सञ्चालकहरूले त्यतिखेर सवारी चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान नगरिएको भनी जिल्ला प्रशासनसँग समय माग गरेको थियो र उनीहरूलाई मङ्सिर १५ गतेसम्म आवश्यक सबै कागजात साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिएर ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको थियो । यातायात कार्यालयले एक चरणमा ई–रिक्साहरूको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । २७ सय ई–रिक्साको लागि परेको आह्वानमा केवल ६५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । वीरगंजमा मात्र ११ सयको हाराहारीमा ई–रिक्सा सञ्चालनमा छ । ई–रिक्सा सञ्चालनको लागि पहिलो चरणमा भएको सहमतिमा केवल ४ सय लाई इजाजत दिने निर्णय भएको थियो । सोविपरीत ७
फूलकौलमा रक्तदान, तालिम र सम्मान कार्यक्रम
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं.३ भौराटार—गम्हरियाको पूmलकौलमा ज्योति विकास क्लबको आयोजनामा रक्तदान, तालिम र सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद रामचन्द्र साहले क्षेत्र नं ३ को विविधीकरण तथा क्षेत्रीय विकास निर्माणलगायत सामाजिक क्षेत्रका विकासमा आपूmले काम गरेको दाबी गरे । उनले सो क्षेत्रमा विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदैं जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे । एमालेले पार्टीका तर्फबाट विजयी सांसदहरूले पर्सामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने विकासका काममा तदारुकता देखाउँदै आएको कारण आकर्षण बढेको दाबी पनि गरे । पूmलकौलमा आज सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा २७ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । प्रदीप रौनियार, धीरज ठाकुर, गम्भीरा साह, सत्येन्द्र पटेल, अङ्कित चौरसिया, जुगेश साह, दिलीप गुप्ता, शंभु यादव, वासुदेव यादवलगायतले रक्तदान गरेको प्रमुख मानन्धरले बताए । यसैगरी आज सोही स्थानमा ज्योति विकास क्लबको आयोजनामा महिलाहरूको लागि ६ महिने सिलाइकटाइ तालिम पनि शुभारम्भ गरिएको छ । तालिमको
बाराको जङ्गलमा भेटिएको शवको पहिचान खुल्यो
शिवशङ्कर मिश्र, कलैया, १४ पुस/ जङ्गलबाट हिजो भेटिएको दुईवटा शवको पहिचान खुलेको बारा प्रहरीले जनाएको छ । मृतक भारत बिहार पूर्वी चम्पारण रक्सौल थाना निवासी लक्ष्मीपुर पोखरिया निवासी १८ वर्षीय दिपक राम तथा अरुण राम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले जनाएको छ । मृतक दुवैजना काकाभतिजा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक अरुण रामका दाइ दशरथ रामले शव पहिचान गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना विवरण अनुसार आइतवार दुवैजना खाना खाएर भारतीय नम्बरको गाडी चढेर नेपाल आएको दशरथ रामले प्रहरीलाई जनकारी गराएका थिए । नेपाल आउने क्रममा अरुणको मोबाइलमा फोन आउने बित्तिकै दुवैजना एउटै मोटरसाइकलमा परिवारलाई जानकारी गराई घरबाट हिंडेको प्रहरीलाई जानकारी गराएका छन् । दुवैजनाले बोकेको मोबाइल तथा मोटरसाइकल प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मृतकले प्रयोग गरेको मोबाइलमा कसले फोन कुन नम्बरबाट गरेको अनुसन्धान गर्न बारा प्रहरी भारत गएको बुझिएको छ । करैया–८ सहजनाथ मन्दिरदेखि डेढ किलोमिटर उत्तर जङ्गलमा दुवैजनाको शव प्रहरीले बुधवार दिउँसो फेला पारेको थियो । दुवैजनालाई हातखुट्टा बाँधी घाँ
ठोरीको पर्यटकीय स्थलहरू भरिभराउ
प्रस, ठोरी, १४ पुस/ जाडो मौसम बढेसँगै ठोरीको पर्यटकीय स्थलहरू भरिभराउ हुन थालेका छन् । राईधारा, रानीवन, बुलबुले, क्यामुना घारीलगायत वनभोज स्थल भरिभराउ भएका हुन् । विशेष गरेर भारतीय एवं आन्तरिक पर्यटकहरू वनभोज खान यस ठाउँमा आउने गरेको वनशक्ति युवा क्लबका अध्यक्ष धीरसिंह घिमिरेले जानकारी दिए । जाडो मौसम भए पनि यहाँको पानी तातो हुने, शान्त तथा मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्न पाउने आदि कारणले आकार्षित भएर पर्यटकहरू यो मौसममा प्रत्येक वर्ष बढी आउने गरेको घिमिरले बताए । वनभोजसँगै ठोरीको उच्च ठाउँमा रहेका रेडहिल तथा ह्वाइटहिल चढनसमेत पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको स्थानीय शिक्षक चिरञ्जीवी सापकोटाले बताए । सापकोटा भन्छन्–“भारतीय पर्यटकहरूको घुम्ने र वनभोज खाने मुख्य स्थल ठोरी बनिसकेको छ । दैनिक आधा दर्जनभन्दा बढी भारतको विभिन्न शहरबाट स्कूल बसमा विद्यार्थीहरू आउँछन् । उनीहरू राईधारामा वनभोज गर्छन् । बाँकी समय रेडहिल र ह्वाइटहिल घुम्न रुचाउँछन् । ठोरी–५ मा रहेको डाँडा रातो माटोले बनेको छ । रातो माटोले बनेको पहाडलाई भारतीय पर्यटकहरू रेडहिलको संज्ञा दिन चढ्छन् र त्यहाँबाट नेपाल र भारतक
सीजी कपः सातौंं दिन एसओएस र चाँदबाग विजयी
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ दिल्ली पब्लिक स्कूलमा सञ्चालित चौथो अन्तर्विद्यालय सीजी एजुकेशनल पूmटबल प्रतियोगिताको सातौैं दिन सम्पन्न दुई खेलमा एसओएस स्कूल चितवन र चाँदबाग, काठमाडौं विजयी भएको छ । आज सम्पन्न पहिलो खेलमा एसओएस चितवनले ग्रेस मावि वीरगंजलाई १ का विरुद्ध ९ गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । एसओएसका लोकेन्द्र थापाले २, रोजल दाहालले २, महेश घिमिरेले २, विज्ञान चापागाईं, सन्तोष सोनार, नीतीश सिंहले १–१ गोल गरेका थिए भने ग्रेस माविका हरेराम चौधरीले मात्र १ गोल गरे । पहिलो खेलको म्यान अफ द म्याच एसओएस चितवनका महेश घिमिरे घोषित भए । यसैगरी दोस्रो खेलमा चाँदबाग, काठमाडौंले लिटिल प्mलावर स्कूललाई टाइब्रेकरमा पराजित ग¥यो । निर्धारित समयमा दुवैतर्पmबाट १–१ गोल भएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट गरिएको थियो । दोस्रो खेलको म्यान अफ द म्याच चाँदबागका राजदीपसिंह कार्की घोषित भए ।
आर्थिक विकास र महेन्द्रको राष्ट्रवाद
विश्वराज अधिकारी अत्यन्तै कुख्याती कमाएका युगान्डाका राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे देशभित्र अत्यन्तै अलोकप्रिय भएका थिए । सन् १९६२ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको महŒवाकाङ्क्षा बढेर गएको थियो । सत्ताको दुरुपयोग गर्न थालेपछि भने उनको विरोध ह्वात्तै बढेर गयो । ओबोटेले सुनको तस्करी गरेको आरोपमा संसद्ले छानबिनको माग ग¥यो । छानबिनमा उपस्थित हुनुको साटो उनले संसद् नै विघटन गरिदिए । आपूmलाई (सन् १९६६ मा) राष्ट्रपति घोषणा गरे । उनले आपूmलाई पूर्ण शक्तिसम्पन्न मात्र पारेनन्, युगान्डामा आपतकाल (भ्mभचनभलअथ) लागू पनि गरे । आप्mना धेरै विरोधीहरूलाई जेलमा बन्द गरे । ओबोटेको कुशासनको विरोध युगान्डाभरि हुन थाल्यो । हुन पनि पूर्ण शक्ति आप्mनो हातमा लिन उनले संविधान नै परिवर्तन गरिदिए । आपूmलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । सबै अधिकारहरू राष्ट्रपतिमा केन्द्रित गरेर शक्तिसाली अति बने । तर ओबोटेको शक्तियात्राले निरन्तरता पाउन सकेन । सन् १९७१ मा कमनवेल्थको सम्मेलनमा भाग लिन उनी सिंगापुर गएको बेला उनकै विश्वासपात्र एवं सेना अधिकारी इदि अमिनले सैनिक विद्रोह (ऋयगउ) गरेर ओबोटेलाई सत्ताच्युत गरिदिए । इदि अमिन आफू
ट्रम्प, मोदी र आर्थिक विकास
शीतल महतो यतिखेर विश्वका दुई नेता चर्चाको शिखरमा छन् । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । विश्वले गरेका अनुमानविपरीत आप्mना प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएर संसारभरिकै ध्यानाकर्षण गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचलनमा रहेका ठूला दरका नोट विस्थापनको घोषणा गरेर विश्वको ध्यानाकृष्ट गरे । ट्रम्पको विजयपछि विश्वका कतिपय नेताले उनीसँग काम गर्न कठिन हुने भनेका छन् भने कसैले मिलेर काम गर्ने भनेका छन् । विशेषगरी ट्रम्पका युरोप नीति र सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने धेरैमा कौतूहलता छ । ट्रम्पले आप्रवासीहरूका सम्बन्धमा व्यक्त गर्दै आएका धारणा र उनले लिन सक्ने अनुमान गरिएको नीतिप्रति धेरैको चासो छ । विशेषगरी संसारभरका मानिसको आकर्षण रहेको अमेरिकामा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको छ । अमेरिकाले लिने आर्थिक नीतिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने भएकोले अब अमेरिकामा कस्तो नीति आउला र कसरी अगाडि बढ्लान् भनेर सबैले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहे
राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्चको व्यवस्थापन
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव संङ्घीय प्रणालीको सफलताको सबै भन्दा महŒवपूर्ण कडी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड र उचित व्यवस्थापन हो । सन्तुलित आर्थिक विकास सङ्घीयताको अपरिहार्य तŒव हो भने अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताको आधार हो । सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापन महŒवपूर्ण हुन जान्छ । कर उठाउने, त्यसको बाँडफाँड र खर्च व्यवस्थापन राजनीतिक र आर्थिक दुवै प्रयोजनार्थ महŒवपूर्ण रहन्छ । कर तथा अन्य राजस्व कसले निर्धारण गर्ने कसले उठाउने र कसले केमा खर्च गर्नेलगायत कुरा विवादका कारण बन्ने गर्छन् । यसर्थ यस्ता विषयमा गम्भीरतापुर्वक संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्छ किनभने एकभन्दा बढी तहको सरकारहरूको अधिकारमा ताŒिवक असर पर्न सक्छ । यसर्थ अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड तथा खर्च व्यवस्थापनको आधार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बन्न सक्छ । राजस्व सङ्कलनको अधिकार र खर्च गर्ने अधिकारको उचित व्यवस्थापनले विद्र्रोह–विवाद एवं हरेक खाले असन्तुष्टिको अन्त्य गर्ने हुँदा संविधानको वर्तमान व्यवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि संशोधन अपरि
ई. गोपाल श्रेष्ठ घर भित्र, कार्यस्थलमा, राष्ट्रमा अनि धर्तीमा नै साना–ठूला समस्याहरू देखा परिरहन्छन् । कुनैकुनै समस्याको प्रकृति त यस्तो हुन्छ कि समाधान नगरी धरै पाइँदैन । समस्या साँच्चीकै समस्या हो कि होइन भनी यकिन गर्न हामीले समस्याको स्रोतको खोजीनीति गर्नु नै पर्छ । अनि यसलाई सम्बोधन गरिएन भने यसको नकारात्मक प्रभाव के कति पर्छ प्रक्षेपण गर्नु नै पर्छ । प्रभाव नै पर्दैन ( परे पनि ढाड नै भाँच्ने प्रकारको छैन भने आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना हुँदैन । तर साँच्ची नै समस्या गम्भीर प्रकृतिको छ र यसको बलियो प्रभाव पर्दैछ भने हामीहरूले यसलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । यस्तै गम्भीर प्रकृतिको समस्या समाधान गर्न हामीलाई हाम्रो मात्र बुद्धि–विवेकले भ्याउँदैन र हामीले अरूको बुद्धि–विवेकको पनि सहारा खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ । सकभर यस्तो समस्या समाधान नगर्दा कसलाई असर पर्छ, यस्तो व्यक्ति पत्ता लगाई उनीहरूको समूह तयार गर्नुपर्छ । समूहमा सानो–ठूलो, उच्च ओहदाको, सानो ओहदाको, कम उमेरको, धेरै उमेरको, महिला–पुरुष जोसुकै पनि हुन सक्छन् । तर यसमा एउटा महŒवपूर्ण कुरा के छ भने यसमा उमेरको, ओहदा
यस असफलताको दोषी को ?
श्रीमन्नारायण विश्वको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै कसैको दासता नबोकेको स्वाभिमानी राष्ट्र नेपालको आर्थिक स्थितिप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । वर्तमानमा यसले सार्कको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ तर आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सार्कमा यसको अवस्था सा¥है कमजोर छ । गएको साढे दुई दशकमा देशमा दुई ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए तर जनताको जनजीवनमा खासै परिवर्तन आएको देखिएन । विश्व मानचित्रमा आप्mना दक्षिणी एसियाली छिमेकीको तुलनामा नेपाल आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा कमजोर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । विगत साढे दुई दशकमा पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका, सरकारमा सहभागी रहेका तथा नीति निर्माणको तहमा बसेका र योजना आयोगमा रहेकाहरूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्दछ । चुनावको बेला तथा समय–समयमा भावनात्मक एवं संवेदनशील नारा लगाएर चुनावी सफलता हासिल गर्न सकिएला, केही समयको निम्ति जनताको आवश्यकता तथा चाहनामाथि पनि विराम लगाउन सकिएला तर यसबाट देश एवं जनताका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान हुन सक्ने छैन । एकले अर्कामाथि दोषारोपण तथा विदेशमाथि आरोप लगाएर चोखिन खोज्ने राजनीतिबाट अन्ततः द